အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ကံကြမ္မာ ကစားဝိုင်း
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Wednesday, December 22, 2010 Wednesday, December 22, 2010 Labels: ၀တ္ထုတိုများ
သေတ္တာရှေ့တွင် ကွပ်ပျစ်သဏ္ဍာန် စင်တစ်ခု ရှိနေပြီး ဖယောင်းပုဆိုး သို့မဟုတ် မိုးကာခင်းထားပြီး ၄င်း အခင်းပေါ်တွင် အံစာတုံးမှ ပုံများဖြစ်သည့် အကောင် ၆ကောင်ကို တစ်ကောင်လျှင် တစ်ကွက်ကျ ရေးဆွဲထားပါသည်။ထိုးသားဖြစ်သူက အံစာတုံး အနေအထားကို ကြည့်၍ အပေါ်မျက်နှာပြင် ကျနိုင်မည် ထင်သည့်အကောင်ကို ၄င်း အကွက်များထဲတွင် ရေးထားသော ပုံနေရာတွင် ရွေးချယ်ကာ ပိုက်ဆံထိုးရသည်။ မိမိထိုးမည့်ငွေကို အကွက်လေးထဲ ပစ်ချထားလိုက်ရုံဖြင့် ထိုးပြီးသား ဖြစ်သွားတော့သည်။ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် သိပ်မများလှသလို အပျော်ကစားသူများအတွက်လည်း စိတ်အပန်းဖြေ သဘောဖြင့် လာဆော့ကြလေ့ရှိသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က ကြိုးကို ဆွဲချလိုက်လို့ အပေါ်ကလိမ့်ကျလာသော အံစာတုံးမှာ အပေါ်မျက်နှာပြင်ကျသော အကောင် သုံးကောင်ထဲတွင် မိမိထိုးထားသည့် အကောင်ပါလျှင် ဒိုင်ဖြစ်သူက တစ်ဆ ပြန်လျှော်ပါသည်။ ဥပမာ တစ်ထောင်တန် ထိုးထားလျှင် တစ်ထောင်ပြန်လျှော်ပါသည်။ ထိုးသည့်အကောင် ၂ကောင် ပေါ်နေလျှင် နှစ်ဆ ၊ ၃ကောင်ဆိုလျှင်တော့ သုံးဆ ပြန်လျှော်သော်လည်း ခုလို ၃ကောင်လုံး ကျဖို့ဆိုသည်မှာ ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ ကိစ္စဖြစ်ပြီး ထိုသို့ တိုက်ဆိုင်ဖို့ဆိုသည်မှာ ခဲယဉ်းလွန်းသော ဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ မိမိထိုးထားသည့်အကောင် တစ်ကောင်မှ မပါလျှင်တော့ ဒိုင်ကထိုပိုက်ဆံများကို သိမ်းသွားပြီး ဒိုင်စားသွားပါတော့သည်။
ထိန်လင်းသည် ၄င်းလောင်းကစားနည်းကို အောင်ကြီးက ရှင်းပြရင်းကစားပြတော့ စိတ်ဝင်တစားဘေးကနေ ရပ်ကြည့်နေလေသည်။ ကြိုးတန်းလေးကို ဆွဲချချိန်တွင် ငွေထိုးထားကြသူများထံမှာ ကြက်ကြက်ကြက်… ဖားဖားဖား စသဖြင့် မိမိထိုးထားသော အကောင်နာမည်များကို အော်ဟစ်နေကြသည် ကလည်း ကစားဝိုင်းကို အသက်ဝင်စေသလို စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းနေလေသည်။ ရပ်ကြည့်နေရင်း ခက်ခက်ခဲခဲမရှိလှသော ထိုးပုံထိုးနည်းကို နားလည်လာသလို နိုင်နေသော အောင်ကြီးကို ကြည့်၍ စိတ်ကပါလာတော့သည်။ မိမိထိုးထားသော အကောင် ကျမကျကို ကံတရားနှင့် အလောင်းအစား လုပ်ကြခြင်းသာ ဖြစ်လေသည်။ အောင်ကြီးကလည်း သူ့ကို အပျော် ကံစမ်းသည့်အနေနှင့် စမ်းကြည့်ဖို့ မကြာခဏတိုက်တွန်းရာ နောက်ဆုံးတွင် သူ့ အင်္ကျီထဲမှ ပါလာသော ပိုက်ဆံလေးကို ထုတ်ပြီး ၅၀၀ တစ်လှည့် ၁၀၀၀ တစ်လှည့် ထိုးမိလေသည်။ သူကံကောင်းချင်တော့ သူလှည့်ပတ်ထိုးသော အကောင်သည် အလှည့်တိုင်းတွင် မပါသော်လည်း ပါသည့်အလှည့်က များသောကြောင့် ထိုနေ့အဖို့ သူ ငွေတစ်သောင်းကျော် ရလိုက်လေသည်။ သူနိုင်နေမှန်းသိသော အောင်ကြီးကလည်း အသာလက်ကုတ်၍ သူ့ကိုပြန်ကြရန်အချက်ပြသဖြင့် နှစ်ယောက်သား အနိုင်ရသောငွေများကို အသာသိမ်း၍ ၆ကောင်ဂျင်ဝိုင်းရှေ့မှ ထထွက်လာခဲ့ကြလေသည်။
ထိုနေ့က သူနှင့်အောင်ကြီး အတော်ပျော်ကြသည်။ ညနေဈေးသို့သွားကာ ဘီယာသောက်ရင်း အမြည်းကောင်းကောင်းဖြင့် အောင်ပွဲခံကြလေသည်။ အောင်ကြီးက သူအားသည့်ရက်များတွင် ခုလိုလာလာခေါ်မည်ဟု ပြောရာ နိုင်လာသည့်ငွေကလေးကို မက်မောမိတာရော၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ ကောင်းလှသည့် ထိုကစားနည်းကို သူသဘောကျသွားတာပါ ပေါင်းပြီး သူ သဘောတူလိုက်လေသည်။ ခုလိုကျတော့ ငွေတစ်သောင်းရဖို့ သိပ်ကိုလွယ်ကူပါလားဟု သူတွေးမိကာ ပျော်ရွှင်နေမိတော့သည်။ ညပိုင်း သူ့အလုပ်ပြန်ဆင်းချိန်တွင် ငွေရလာသဖြင့် ပျော်ရွှင်စိတ်ကြောင့်ရော၊ ဘီယာတန်ခိုးကြောင့်ပါ ရွှင်ပျ အာသွက်နေသောသူ့ကို စားပွဲထိုးကောင်လေးများ ထူးဆန်းသလို ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့် လုပ်နေသည်။ သူကတော့ ထိုနေ့အဖို့ ခါတိုင်းနှင့်မတူအောင် နှုတ်သွက်လက်သွက်ဖြင့် လက်ဖက်ရည် ဖျော်နေလေတော့သည်။ ညအိပ်ချိန်ရောက်လျှင်ပင် ခါတိုင်းလို ခေါင်းချလိုက်တာနှင့် အိပ်ပျော်သွားခြင်းမရှိဘဲ သူ့မျက်လုံးထဲတွင် နေ့လည်က ကစားခဲ့သော အကောင်လေးများဖြစ်သည့် ကြက်၊ ပုဇွန်၊ ဆင်၊ ကျား၊ လိပ်နှင့် ငါးတို့၏ ပုံရိပ်များက တ၀ဲဝဲလည်နေတော့သည်။ အိပ်ပျော်သွားသည့်အခါ အိပ်မက်ထဲတွင်ပင် ၆ကောင်ဂျင်ထိုးပြီး ပိုက်ဆံများစွာ နိုင်သည်ဟု အိပ်မက် မက်မိသည်ထိ လောင်းကစားကို စတင် စွဲလန်းမိလေတော့သည်။
သို့နှင့် နောက်ရက်များတွင် အောင်ကြီးလာခေါ်မည်ကို သူစောင့်နေမိသော်လည်း ၃ရက်လောက် ပေါ်မလာဘဲ ပျောက်နေသဖြင့် သူ့မှာ နေမထိထိုင်မသာဖြင့် တမျှော်မျှော်ဖြစ်နေလေသည်။ နောက်၃ရက်မြောက်နေ့မှ အောင်ကြီးက ရောက်လာပြီး သူခရီးထွက်သွား၍ မရောက်ဖြစ်ကြောင်း သူ့ကိုပြောလာသည်။ ညနေ အပြင်သွားဖို့လာခေါ်မည်ဟု သူ့ကိုပြောသောအခါ သူ့ဆန္ဒပြည့်ဝသွားသဖြင့် ပျော်ရွှင်သွားတော့သည်။ ညနေတွင် သူအလုပ်နားချိန် ရေမိုးချိုးပြီး အောင်ကြီးကို လည်တဆန့်ဆန့်ဖြင့် မျှော်နေမိသည်။ ၄နာရီလောက်တွင် အောင်ကြီးရောက်လာပြီး နှစ်ယောက်သား မြို့အစွန်လမ်းဘက်သို့ ထွက်လာကြသည်။ ဂျင်ဝိုင်းများရှိရာ လမ်းသွယ်လေးပေါ်တွင် လူများ၊ အသံများဖြင့် စည်ကားနေတော့သည်။ ထိုလမ်းပေါ်တွင် ၆ကောင်ဂျင်ဝိုင်းများ တော်တော်များများရှိနေပြီး ၀ိုင်းတိုင်းတွင်လည်း လူများစည်ကားနေသည်။ လူအနည်းငယ်ရှင်းသော ၀ိုင်းတစ်ခုတွင် သူနှင့်အောင်ကြီး ၀င်လိုက်ကြပြီး တန်းပေါ်တွင်တင်လိုက်သော အကောင်များ၏ အနေအထားကိုကြည့်ပြီး မည်သည့်အကောင်ကျနိုင်မည်ကို ခန့်မှန်းကာ ထင်သည့်အကောင်ကို တစ်လှည့်စီ ထိုးကြလေတော့သည်။ သူရော အောင်ကြီးပါ ပထမပိုင်းတွင် ရှုံးနေသော်လည်း ညနေစောင်း ၆နာရီလောက်တွင် သူ ပြန်နိုင်စပြုလာသည်။ အောင်ကြီးကတော့ ယနေ့ ကံမလိုက်သောကြောင့်ဖြစ်မည် ပါလာသည့်ငွေ အကုန် ကုန်သလောက်ဖြစ်သွားသည်။ ငွေကုန်၍ ပြန်ကြဖို့ အောင်ကြီးက လောဆော်သည့်အခါ နိုင်စပြုလာပြီဖြစ်၍ သူ မပြန်ချင်သေးသော်လည်း ထပြန်ခဲ့ရလေသည်။
အပြန် ညဈေးတန်းတွင် ဆီချက်ခေါက်ဆွဲသာ စားဖြစ်ကြပြီး ပိုက်ဆံကို သူက ရှင်းပါသည်။ အောင်ကြီးက “ခင်ဗျားက လောင်းကစားနဲ့ အကျိုးပေးပုံရတယ်.. လာတဲ့ရက်တိုင်း မရှုံးဘူးဗျနော် ” ဟု သူ့ကို ပြောတော့ သူ့မျက်နှာပြုံးသွားရသည်။ “မနက်ဖန် လာဦးမလားဗျ” သူက မေးလိုက်တော့ “မလာဖြစ်ဘူး.. မနက်ဖန် ကျွန်တော် ဦးလေးခိုင်းထားတဲ့ အလုပ်ကလေးရှိလို့.. အားတဲ့နေ့မှ လာခဲ့မယ်ဗျာ” ဟုပြန်ပြောသည်။ သူတို့နှစ်ယောက် လမ်းခွဲကြပြီး ဆိုင်သို့ သူပြန်ရောက်တော့ ညဦးပိုင်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်သူများဖြင့် စည်ကားစ ပြုနေပြီ။ ကိုကျော်ဝေက ကောင်တာတွင် ထိုင်နေရင်း သူဝင်လာတာကို လှမ်းနှုတ်ဆက်သည်။ ခွင့်တောင်းပြီးမှ ထွက်သွားသော်လည်း အပြင် သိပ်ထွက်လေ့မရှိသော သူ အပြင်မှာ အချိန်အနည်းငယ်ကြာသည်ကို သူ့စိတ်ထဲ အနည်းငယ်တော့ ထူးဆန်းနေဟန်ရှိသည်။ သို့သော် ဘာမှတော့ မမေးပါ။ ထမင်းစားဖို့သာ သူ့ကိုပြောသည်။ သို့သော် သူက အပြင်တွင် ဆီချက်စားလာကြောင်း ပြောလိုက်ပြီး ဆိုင်နောက်ဖက်သို့ ၀င်လာခဲ့လိုက်သည်။
နောက်ရက်များတွင် အောင်ကြီး မလာသော်လည်း သူ့နားချိန်များတွင် အပြင်ထွက်ဖို့၊ ဂျင်ဝိုင်းဖက်သို့ သွားဖို့သာ သူ စိတ်အားထက်သန်နေတော့သည်။ ကိုကျော်ဝေက ဆိုင်ကို ကြည့်ထားဖို့ သူ့ကို မှာခဲ့သည့် နေ့မှလွဲ၍ ဆိုင်တွင် ရှိနေလျှင်တော့ သူအပြင်ထွက်သည်။ သူ့ခြေလှမ်းများ၏ ဦးတည်ရာအရပ်သည် ၆ကောင်ဂျင်ဝိုင်းဆီသို့သာ… အောင်ကြီးမပါဘဲ သူသွားဆော့သည်မှာ နိုင်တစ်လှည့် ရှုံးတစ်လှည့်သာဖြစ်သည်။ ရှုံးသည့်နေ့တွင် သူပါသွားငွေ ကုန်မှာ ၀ိုင်းကနေ ထပြန်လာဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း နိုင်နေသည့်အခါများတွင်မူ ရှေ့ဆက်နိုင်လိုသော လောဘဇောဖြင့် အရှိန်ထိန်းက ထပြန်ရမည်ကို သူ့စိတ်က လိုက်မနာနိုင်သဖြင့် ၀ိုင်းကနေမထမိဘဲ ဆက်ပြီးကစားရာ နိုင်ထားပြီးသားများ ပြန်ပါသွားပြီး လက်ထဲတွင် တစ်ပြားမှ မကျန်တော့သည့်အဖြစ်က မကြာခဏ ဖြစ်လာသည်။ စာရင်းချုပ်လိုက်လျှင် အရှုံးက ပိုများလာပြီး သူစုထားသောငွေလေး တတိတိဖြင့် ပွန်းလာတော့သည်။ ရှုံးလာသည့်နေ့တွင်တော့ နောက်နေ့တွင် လောင်းကစားဝိုင်းသို့ မသွားတော့ဟု စိတ်က ဖြစ်မိသော်လည်း နောက်တစ်နေ့ ရောက်လာလျှင်တော့ အရင်နေ့က ရှုံးထားသည့်ငွေကို နှမြောစိတ်ဖြင့် အရင်နေ့တွေက ကံမကောင်းလို့ ရှုံးသော်လည်း ဒီတစ်ခါတော့ အရှုံးကို ပြန်ရလောက်အောင် ကံကောင်းမှာပါလေ ဟုဆိုကာ ညနေဆိုလျှင် ပိုက်ဆံကလေးထည့်ပြီး ထွက်လာမိပြန်တော့သည်။
လောင်းကစားတို့၏ ထုံးစံမှာ နိုင်ပြီး သူဌေးဖြစ်သွားသူ အလွန်အင်မတန်ရှားပါးလှပြီး နောက်ဆုံးတွင် လောင်းကစားကြောင့် ဘ၀ပျက်သွားသူ၊ ဆင်းရဲသွားသူ များသာ ရှိသည်ကို ထိန်လင်း သတိမပြုမိခဲ့သလို လောင်းကစားအပေါ် တွယ်မက်သည့် မိမိစိတ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းလည်း မရှိခဲ့ပါ။ နက်သထက်နက်လာသော လောင်းကစားအမှောင်စိတ်ဖြင့် ဆော့ကစားရင်း သူစုဆောင်းထားသောငွေများ လုံးဝ ကုန်ဆုံးသွားလေတော့သည်။ ထိုအခါ ကိုကျော်ဝေထံတွင် သူ့မိခင် နေမကောင်းဖြစ်နေသောကြောင့် သူ့အိမ်က ငွေလိုသည်ဟု ဖုန်းဆက်လာသဖြင့် အိမ်ကိုငွေပို့လို၍ ၃လစာ ကြိုတင်လခ ထုတ်ပေးရန် ခွင့်တောင်းလေသည်။ သူ့ကို ယုံကြည်စိတ်ချသော ကိုကျော်ဝေက မေးမြန်းခြင်းမရှိဘဲ ချက်ခြင်းဘဲထုတ်ပေးပါသည်။ ညနေများတွင် အပြင်သွားသည်မှာ ကောင်မလေး( ချစ်သူရည်းစား) ရနေလို့လား ဟုတော့ ပြုံးပြုံးရယ်ရယ်ဖြင့် မေးလေသည်။ သူက ဘာမှ ပြန်မပြောဘဲ ပြုံးရုံသာပြုံးနေခဲ့သဖြင့် ထူးထူးခြားခြားတော့ ဘာမှ ထပ်မပြောတော့ပါ။
၃လခစာ ကြိုတင်ထုတ်လာပြီး သူ့ခြေလှမ်းများက ဂျင်ဝိုင်းများဆီသို့သာ ရက်ခြား သွားမြဲသွားနေခဲ့သည်။ အောင်ကြီးပါသည့်အခါလည်း ရှိသလို မပါသည့်အခါလည်း ရှိသည်။ သူက အောင်ကြီးမပါတာကို ပိုပြီး သဘောကျသည်။ အောင်ကြီးက နိုင်ပြီဆိုလျှင် အသာထပြန်ဖို့ လောဆော်တတ်သူ ဖြစ်သောကြောင့် သူ့မှာ အရှိန်ပျက်ရသည်ဟု သူကထင်သည်။ လုံးလုံးလျားလျား နိုင်လာသောနေ့များ ရှိသော်လည်း ထိုနေ့သည် အလွန်နည်းပါသည်။ အရှုံးနှင့် ပြန်လာရသည့်ရက်ကသာ များလေသည်။ ထို့ကြောင့် ကြိုတင်ထုတ်ငွေ ၃လစာမှာ တဖြေးဖြေးနည်းလာပြီး ကုန်သလောက် ရှိလေတော့သည်။ တစ်ည သူအိပ်မက်မက်သည်။ အိပ်မက်ထဲတွင် ရေကန်ကြီးတစ်ကန်သို့ သူရောက်သွားပြီး ငါးမျှားသည်တဲ့.. ကန်ထဲတွင် ငါးများမှာ တစ်ကောင်နှင့်တစ်ကောင် ထပ်နေသည် ထင်ရလောက်အောင် ပြွတ်သိပ်နေပြီး များပြားလွန်းလှကာ ငါးမျှားနေသော သူ့ဘေးတွင်လည်း ငါးတွေ အပုံလိုက်ကြီး ဖြစ်နေခဲ့သည်။ တစ်လက်လက်ဖြစ်နေသော ငါးအကြေးခွံများမှာ နေရောင်အောက်တွင် ငွေရောင်လက်ကာ တောက်ပနေခဲ့သည်။ အိမ်မက်မှ သူနိုးလာချိန်တွင် မြင်မက်ခဲ့သောအိမ်မက်မှာ ထင်ထင်ရှားရှား သူ့အာရုံတွင် ကျန်နေခဲ့သည်။ မနက်ခင်း လက်ဖက်ရည်လာသောက်သော သူ့သိသည့် သူတစ်ချို့ကို ပြောပြတော့ အိပ်မက်အတိတ်ကောက်ယူရလျှင် ငါးဆိုသည်မှာ ငွေဟု အဓိပ္ပါယ်ထွက်ကြောင်း အိမ်မက်တွင် ငါးအမြောက်အမြား မြင်မက်သည်ဆိုလျှင် ငွေများစွာဝင်တတ်သည်ဟု ပြောပြကြသည်။ သူမေးကြည့်သည့်သူ တော်တော်များများက အိပ်မက်ကောင်းသည်ဟု သူ့ကိုပြောကြလေသည်။
ထိုစကားများကြောင့် သူ့စိတ်ထဲတွင် ဒီနေ့သည် သူကံကောင်းမည့်နေ့ ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်မိလေတော့သည်။ ဒီနေ့သာ ဂျင်ဝိုင်းသွားလိုက်လျှင် အရင်ရက်တွေက ဆုံးရှုံးသွားခဲ့သော သူ့ငွေတွေ အားလုံး ပြန်ရနိုင်မည်မှာ သေချာသည်ဟု သူက တွေးမိသည်။ ယခုလို ထင်ထင်ရှားရှား အိမ်မက်မျိုး တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မက်လာတော့ သူ ဒီအခွင့်အရေးကို လက်လွတ်မခံသင့်ကြောင်းလည်း သူ့စိတ်က တွေးနေမိသည်။ သို့သော် ဂျင်ဝိုင်းသွားဖို့ သူ့လက်ထဲတွင် ပိုက်ဆံ များများစားစား မကျန်တော့ပါ။ တစ်ထောင်တန် ၅ရွက်လား ကျန်တော့တာကို သူသတိရမိသည်။ အိမ်ကိုပင် ငွေမပို့ဖြစ်တာ ကြာပြီ။ သူ ကြိုတင်လခ ထုတ်ထားသည်မှာ နောက် ၂လစာ ပင် အကြွေးကျန်နေသေးသည်။ ခုမှတစ်လသာ ကုန်သေးသည်။ ဒီတော့ ထပ်ထုတ်ဖို့လည်း မဖြစ်နိုင်တော့.. ဒီနေ့ကိုလည်း သူ့အတွက် ကံကောင်းမည်ကို ယုံကြည်သဖြင့် သွားဖြစ်အောင်လည်း သွားချင်မိသည်။ ခက်တာက ငွေမရှိသည့်ပြဿနာ.. အောင်ကြီးလာလျှင် ကောင်းမည်ဟု သူတမ်းတမိသည်။ အောင်ကြီးကို အိပ်မက်အကြောင်းပြောပြကာ သူ့ထံကနေ ငွေအနည်းအပါး ချေးငှား၍ ရမည်ဆိုလျှင် သူ့အတွက် အဆင်ပြေနိုင်မည်လေ။ ငွေရနိုင်မည့်အရေး စဉ်းစားရင်း လူက လက်ဖက်ရည်ဖျော်နေရသော်လည်း သူ့စိတ်တွေက ဂျင်ဝိုင်းသို့သာ တစ်ရစ်ဝဲ၀ဲ ရောက်ရှိနေသည်။
ကံကောင်းချင်တော့ နေ့လည်စောင်းတွင် ကိုကျော်ဝေက သူ့ကိုပြောလာသည်။ သူအပြင်ထွက်မည်ဆိုလျှင် ဆိုင်အတွက် နို့ဆီ၊သကြား၊ ဂျုံစသဖြင့် အမြဲဝယ်လေ့ရှိသော ဆိုင်တွင် နို့ဆီ ၃ဖာနှင့် ဂျုံတစ်အိတ် မှာပြီး ဆိုင်သို့ ပို့ပေးရန် ၀င်ပြောခိုင်းပြီး ပိုက်ဆံ ၆၀၀၀၀ ကိုပါ ယူသွားရန် ပြောလေသည်။ ထိုဆိုင်သည် ကိုကျော်ဝေ့သူငယ်ချင်းဆိုင်ဖြစ်ပြီး သူ့ဆိုင်တွင် ပစ္စည်းများဝယ်တိုင်း ဆိုင်အလုပ်သမားများက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သို့ အရောက် လိုက်ပို့ပေးတတ်သည်။ ခါတိုင်းလည်း ကိုကျော်ဝေက ခုလို သူ့ကို ပိုက်ဆံဝင်ပေးခိုင်းတတ်ပါသည်။ သို့သော် အခုလို ပိုက်ဆံလိုအပ်နေချိန်တွင် ကိုကျော်ဝေစကားက သူ့အတွက် ပျားရည်စက်ပမာ ဖြစ်စေတော့သည်။ သူ လက်ခနဲ အတွေးရလိုက်သည်က ကိုကျော်ဝေ ပေးခိုင်းသောငွေဖြင့် သူဒီညနေ ကစားလိုက်မည်ဆိုလျှင် သူ့အိမ်မက်အရ နိုင်မှာ သေချာသလောက်ရှိပြီး ယခင်က ငွေများပါ ပြန်ရနိုင်သည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ကစားဝိုင်းက အပြန်ကျမှ ဆိုင်တွင် ပစ္စည်း ၀င်မှာလျှင် ဖြစ်သည်ဘဲဟူ၍ သူက တွေးလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် အောင်ကြီးရောက်မလာသော်လည်း ညနေတွင် ရေချိုးပြီး ကိုကျော်ဝေထံမှ ပိုက်ဆံကို ယူကာ သူအပြင်ထွက်လာခဲ့သည်။ လက်ထဲတွင် ပါလာသော ငွေ ၆၀၀၀၀ မှာ သူ့အတွက် ကံကောင်းခြင်း ပဏာမဟု သူယုံကြည်သည်။ အဖြစ်အပျက်မှာ တိုက်ဆိုင်စွာ ဖန်တီးလာခြင်းဖြစ်ပြီး ဒီနေ့ သူ့ကံကောင်းမှုကို ဘယ်အရာကမှ တားဆီး၍ ရနိုင်တော့မည်မဟုတ် တွေးမိကာ ၀မ်းသာမိနေလေတော့သည်။
ကိုကျော်ဝေ၏ သူငယ်ချင်းဆိုင်ရှေ့က မဖြတ်ဘဲ အခြားလမ်းမှနေ၍ ဂျင်ဝိုင်းရှိရာဘက်သို့ သူလျှောက်လာခဲ့သည်။ သူ့စိတ်အထင် ဂျင်ဝိုင်းသည် အခါတိုင်းနေ့များထက် ပို၍ စည်ကားနေသည်။ သူဝိုင်းတစ်ခုတွင် ၀င်လိုက်ပြီး ရွှေငါး နေရာတွင် ငွေ တစ်ထောင်ကနေ စထိုးသည်။ ကျလာသော အံစာတုံးတွင် ရွှေငါး ၂ကောင်ပါလာသဖြင့် ဒိုင်ထံမှာ ထောင်တန်နှစ်ရွက် သူရလိုက်သည်။ နောက်တစ်လှည့်တွင် ရွှေငါးတွင် တစ်ထောင် ကြက်တွင် နှစ်ထောင် သူထိုးပြန်သည်။ ရွှေငါးရောကြက်ပါ ပါလာသဖြင့် ငွေနှစ်ထောင် သုံးထောင် ထပ်ရပြန်သည်။ သူ နည်းနည်းမြောက်သွားသည်။ သူ့အိပ်မက် မှန်နေပြီ။ ဒီနေ့ သူကံကောင်းနေသည်မှာ သေချာသည်ဟု သူက ယုံကြည်သထက် ယုံကြည်လာသည်။ ထို့ကြောင့် ငွေကို တိုး၍ ထိုးစမ်းကြည့်ရန် သူဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ သူထင်သည့်အကောင်များကို သုံးထောင်ထိ တက်၍ ထိုးလိုက်သည်။ ထိုးသည့်အကောင်တိုင်း မှန်နေသည်က များ၍ သူ့လက်ထဲတွင် ပိုက်ဆံတွေများလာသည်။ ဘေးကလူကပင် သူ့ကို “ခင်ဗျားဒီနေ့ လပ်ကီးတယ်ကောင်းနေပါလား၊ များများထိုးပါလားဗျ” ဟူ၍ ပြောလေသည်။ ထိုအချိန်တွင် သူ့လက်ထဲတွင် ငွေသုံးသောင်းခန့်နိုင်နေပြီ ဖြစ်သည်။ သူထပြန်မလား စဉ်းစားမိသော်လည်း သူကံကောင်းနေသည့် ဒီလိုနေ့မျိုး နောက်တစ်ကြိမ် ကြုံလာဖို့ မလွယ်ကူနိုင်ဟု တွေးမိကာ မပြန်ဖြစ်ဘဲ ငွေကို ဆတိုး၍ ထိုးကာ ဆက်ကစားနေမိတော့သည်။
အသောမတတ်နိုင်သော သူ၏လောဘဇောကြောင့် ထိုးနေရင်းနှင့် နိုင်ထားသောငွေများ တဖြေးဖြေး ပြန်ပါနေပြီး လက်ထဲက ငွေပင် သုံးသောင်းခန့် ထိသွားပြန်လေပြီ။ သို့သော် သူ့အိပ်မက်ထဲက ငါးတွေကို ပြန်မြင်ယောင်ပြီး ဒီနေ့နိုင်ကိုနိုင်ရမည်ဟု တွေးမိပြန်ကာ ဆက်ပြီး ကစားနေတော့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ထိုအချိန်တွင် သူ့ဘေးမှလူထိုးသည့်အကောင် တော်တော်များများ ကျသည်ဖြစ်၍ တစ်ဝိုင်းလုံးတွင် အနိုင်ဆုံးဖြစ်နေသည်။ ထိန်လင်းက ထိုသူထိုးသည့်အကောင်ကို လိုက်ပြီး ထိုးကြည့်သည်။ တစ်ကြိမ်တွင် သူထိုးထားသော လိပ်မှာ ၂ကောင်ပါလာပြီး ထိုးငွေ၂ဆကို သူရလိုက်သည်။ နောက်အလှည့်များတွင်တော့ ထိုးသည့်အကောင်က မပါသည်က များလာသဖြင့် လက်ထဲကငွေ ပါးလျလာပြီး တစ်တောင်တန် ၁၀ရွက်ခန့်သာ ကျန်လေတော့သည်။ သူ့ဘေးက ကြိုးကို ကိုယ်တိုင်ဆွဲချပြီး ထိုးနေသူက “ဒီတစ်ခါ ပုဇွန်ကျမှာ သေချာတယ်ဗျ.. ခင်ဗျား ပုဇွန်ထိုးပါလား.. ကျွန်တော်လည်း ပုဇွန်အောထားတယ်” ဟုသူ့ကို တီးတိုးလှမ်းပြောလေသည်။ “သေချာလား ခင်ဗျားဟာက” ဟု သူပြန်မေးတော့ “သေချာတယ် ကျွန်တော် ပုဇွန်ကျအောင်ကို ကြိုးကိုထိန်းဆွဲမှာဗျ.. ကြည့်လေ ပုဇွန်မှာ ကျွန်တော်အများကြီး ထိုးထားတာ” ဟု ပြန်ပြောသည်။ ဟုတ်တော့ဟုတ်သည်.. ထိုလူက ပုဇွန်နေရာတွင် ငွေ များစွာထိုးထားသည် ထောင်တန် ရွက် ၂၀ကျော်မည်ထင်သည်။ ထို့ကြောင့် သူလည်း နောက်ဆုံး အားကိုးရာအဖြစ် ပုဇွန်ကို ပုံအောလိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ကာ လက်ထဲတွင်ကျန်နေသော တစ်ထောင်တန် ဆယ်ရွက်ကို ပုဇွန်အကွက်တွင် ပုံချလိုက်လေသည်။
ထိုးသားများအားလုံး ထိုးပြီးသွားချိန်တွင် ဒိုင်က ကြိုးဆွဲဖို့ လှမ်းပြောသောအခါ အံစာတုံးများ တစ်ပြိုင်တည်း ကျမလာစေဘဲ တစ်လုံးစီ ကျစေရန် ထိုသူက ကြိုးကို ဖြေးဖြေးချင်း ဆွဲသည်။ ပထမတစ်ကြိမ် အံစာတုံး တစ်လုံး ပြုတ်ကျလာသည်။ ကြက်.. ဟု အော်သံများက ညံသွားသွားသည်။ ကြက်ထိုးထားသူများ ခုန်ပေါက်နေကြသည်။ နောက်တစ်ကြိမ် ထိုလူက အံစာတုံးကို ဆွဲချပြန်တော့ ကျလာသော အံစာတုံး၏ မျက်နှာပြင်ကို သူမကြည့်ရဲအောင်ဖြစ်မိကာ မျက်စိပင် ယောင်ယမ်း၍ မှိတ်လိုက်မိသည်။ သို့သော် ကျား ဟုအော်လိုက်သံ ကြားသဖြင့် သူမျှော်နေသော ပုဇွန်မဟုတ်မှန်း သိလိုက်ရပြန်သည်။ ထိန်လင်း ဇောချွေးများ ပြန်လာပြီ။ ဒီတစ်ကြိမ်သာ ပုဇွန်မဟုတ်ခဲ့လျှင် သွားပြီ.. ပါလာသမျှ ကုန်ပြီ။ ပြီးတော့ သူ့ပိုက်ဆံတွေလည်း မဟုတ်။ ကိုကျော်ဝေကို သူ မည်သို့ မျက်နှာပြရတော့မည်ကို မတွေးတတ်အောင် ဖြစ်နေတော့သည်။ သူ လက်သီးကိုဆုပ်ကာ အသက်ပင်မရှူမိတော့ဘဲ နောက်ဆုံး အံစာတုံးကို ရင်တုန်စွာ စောင့်ကြည့်နေမိသည်။ နောက်ဆုံး ကြိုးအဆွဲမှာ ကျန်နေသော အံစာတုံးက ပြုတ်ကျလာသည်။ အရင်ပြုတ်ကျနေသော အံစာနှစ်တုံးကိုတိုက်ပြီး ခပ်စောင်းစောင်း အနေအထားဖြင့် ပုဇွန်လေးက အပေါ်မျက်နှာပြင်အဖြစ်ကျရန် တာစူနေပြီ.. သို့သော် အရှိန်မသေသေးသော အံစာတုံးမှာ တစ်ဘက်သို့ စောင်းကျသွားပြီး အပေါ်မျက်နှာပြင်က “ဆင် ” ဖြစ်သွားလေတော့သည်။
သူ့ရင်ထဲတွင် ဟာ ခနဲရင်ထဲတွင် ခံစားလိုက်ရသည်။ သွားပြီ.. မျှော်လင့်ချက်တွေအားလုံး ဆုံးပြီ။ လူ့သဘာဝအတိုင်း ဆုံးရှုံးမှုနှင့် ကြုံရမှ အသိတရားတို့သည် လောကရဲ့ ထောင့်အသီးသီးကနေ သူ့ရင်ထဲကို အလိုလို ပြန်ဝင်လာတော့သည်။ သူ့ရင်တစ်ခုလုံး မီးစနှင့် ထိုးခံထားရသလို ပူလောင်နေသည်။ သူ့အတွေးများအားလုံး မည်သည့်အရာတွင်မှ တည်မှီ၍မနေ။ ဘာကိုမှလည်း သူမတွေးတတ်တော့။ အသိတရားနှင့် ပူလောင်မှု နောင်တများသာ သူ့စိတ်နှလုံးထဲကို အလိုလို တလှည့်စီ ဝင်ရောက်နေသည်။ မျှော်လင့်တက်ကြွစွာ ယူဆောင်လာခဲ့သော ငွေအထပ်ကို ပြန်မြင်ယောင်လာသည်။ ကိုကျော်စွာမျက်နှာကလည်း တစ်ချက်တစ်ချက် သူ့အာရုံထဲ ဝင်လာပြန်သည်။ ထိုသို့ ကိုကျော်စွာ့မျက်နာကို အလိုလိုတွေးမြင်မိချိန်မှာ သူရင်ထဲ ဟိုက်ခနဲ ဟာခနဲ ဖြစ်သွားရပြန်သည်။ လည်မျိုတွင် အလုံးကြီးတစ်ခုက အလိုလို လာတစ်ဆို့သလို ခံစားရပြန်သည်။ ထူပူနေသည်ဟုသာ ပြောရမည်။ သူဘာမှမတွေးတတ်။ ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိ။ ကစားဝိုင်းကို အသိစိတ်မဲ့စွာ ငူငူကြီးငေးနေမိသည်။ နှစ်သိမ့်ပေးမည့်သူမရှိ။ အားလုံးသူ့အာရုံနှင့်သူ ဇောကပ်နေကြသည်။ ကစားဝိုင်းဘေးတွင် မျှော်လင့်ချက်များ ယုံကြည်ချက်များ လူမှုရေးများ ကိုယ်ကျင့်တရားများအားလုံး ဆုံးရှုံးသွားသူ တစ်ယောက်ရှိနေသည်ကို ဘယ်သူမှ သတိမရကြပါ။
အရှုံးတရားကို တစ်စစ သူလက်ခံလာနိုင်ချိန်တွင် သူလျှောက်ရမည့်လမ်း တစ်ခုသာ ရှိတော့သည်ဟု သူသိလိုက်သည်။ ဆုံးရှုံးသွားသော ငွေကြေးသည် ဒီခေတ်မှာတော့ ပမာဏများသည်ဟု မဆိုနိင်ပေမယ့် သူ့လို ဆိုင်ဝန်ထမ်း တစ်ယောက်အတွက်တော့ မနည်းလှသော ငွေကြေးဖြစ်သည်။ ကိုကျော်စွာကို အကုန်ဝန်ခံပြီး တောင်းပန်ကာ ကတိပေးလိုက်လျင် ခွင့်လွှတ်နိုင်ကောင်း ခွင့်လွှတ်မည် ဖြစ်သော်လည်း သူ့အပေါ်တွင်ထားသော ညီရင်းအစ်ကိုလို ချစ်ခင်မှုနှင့် ယုံကြည်မှုတော့ ပျက်စီးသွားပေတော့မည်။ ယခင်ကအတိုင်း ဘာအရောင်မှမပါသည့် အကြည့်မျိုးကို ရနိင်တော့မည် မဟုတ်။ သံသယအကြည့်များက ကပ်ငြိပေတော့မည်။ ထိုဒဏ်ကို သူမခံနိင်ပါ။ သူတစ်နေရာသို့ ထွက်သွားရပါတော့မည်။ သို့သော်လည်း လက်ထဲတွင် ငွေက တစ်ပြားမှ မကျန်တော့ပေ။ ထို့ကြောင့် ဝတ်လာသော ဂျာကင်ကို အနီးတွင်ရှိသောသူထံ တောင်းတောင်းပန်ပန်ဖြင့် ရောင်းချပြီး အဝေးပြေးကားဂိတ်သို့ သူခပ်သွက်သွက်လျှောက်ကာ မန္တလေးသို့ သွားမည့်ကားပေါ်ကို တက်လိုက်ပါတော့သည်။
အခုတော့ မျှော်လင့်ခြင်းများ၊ စိတ်ကူးအိမ်မက်များ အားလုံးကို ထားရစ်ပြီး သူ ဒီမြို့မှ စွန့်ခွာခဲ့ရတော့သည်။ သူ့နာမည်နှင့် တစ်သက်လုံး ထိန်းလာခဲ့သော ရိုးသားခြင်းဟူသည့် ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားသည် အကောင်၆ကောင်၏ မာယာတောတွင် အစအနမျှ မကျန်အောင် ပျောက်ဆုံးသွားရလေပြီ။ ယုံကြည်မှုကို အလွဲသုံးစား လုပ်မိသူတစ်ယောက်၏ ရင်ထဲတွင်လည်း နာကျင်ခြင်းနှင့် ပူလောင်ခြင်းကို ခံစားရပါသည်။ ယောက်ျားတန်မဲ့ စီးကျလာသော ပါးပြင်ပေါ်မှ မျက်ရည်များသည် နောင်တတို့ဖြင့် ပူလောင်ကျွမ်းမြေ့၍ နေလေတော့သည်။ ယခုချိန်မှတော့ နောင်တသည် သူ့အတွက်တော့ နှောင်းခဲ့လေပြီ။
ဖြစ်ရပ်မှန်လေး တစ်ခုပေါ်တွင် အခြေခံ၍။
31 Responses to “ကံကြမ္မာ ကစားဝိုင်း”
mg han said...
December 19, 2010 at 5:38 AM
December 19, 2010 at 6:27 AM
ကလေးတုန်းကတော့ ဘုရားပွဲတွေမှာ အဲဒီကစားနည်းလေး ငေးကြည့်ဖူးတယ်
မကောင်းမှုမှန်သမျှ အစမလုပ်မိဖို့ တော်တော်အရေးကြီးတယ်နော်
December 19, 2010 at 6:29 AM
လောင်းကစားက အဲလိုနဲ့ စွဲတာနော်၊
အရေးအသားကျွမ်းကျင်ပြေပြစ်ပုံများ ဖတ်ရတဲ့သူ ဆော့ချင်လာအောင်၊ အစမှာလေ၊ စိတ်တောင်ပါလာသလိုပဲ၊
တော်သေးတယ် အဆုံးမှာ မဆော့ချင်တော့အောင် ရေးထားပေးလို့၊
နိုင်ပြီကွ၊ ပုဇွန်လက်ဖက်ကောင်လုံးကြော်၊ စားချင်လိုက်တာနော်
December 19, 2010 at 7:00 AM
လောင်းကစားမလုပ်ပါဘူး များက ခစ်ခစ်
များလဲ ခုတလော မအားဘူးလေကွယ် ခရစ်စမတ် ရာသီဆိုတော့သိတယ်မလား ရှိုးပွဲတွေသွားရ သီချင်းဆိုရနဲ့ ၁၀ ကိုယ်ခွဲထားရင်တောင် မလောက်ဘူးကွယ် ဟဲဟဲ
အိပ်လိုက်စားလိုက်နဲ့ မအားနိုင်ပါဘူးကွယ်ခုလဲ အပြေးလာတယ် သိလား ခစ်ခစ်
December 19, 2010 at 7:55 AM
မမချောရေ.. ဂလုံး ဂလုံးတော့ ဆော့ချင်ဘူး.. ကြက်တွေ၊ ပုစွန်တွေတော့ ချက်စားချင်သား..
ဟီးး လူကြီးစာရေးထားတာကို လာနောက်တာ..
လောင်းကစားနဲ့ ဘ၀ပျက်သွားတဲ့သူတွေ ဘယ်လောက်တောင်များ များမလဲနော်.. :(
စကားမစပ်.. မနေ့က ၀က်သားနဲ့ မုန်ညင်းချဉ် ပေါင်းပါကြောင်း၊ အလွန်စားကောင်းပါကြောင်း၊ လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကတော့ တစ်ယောက်မှ စားမသွားပါကြောင်း.. ဟိဟိ
December 19, 2010 at 9:05 AM
ကြက် ဆင် ကျား
ပုဇွန် လိပ် ငါး
မေတို့ ဒေသရဲ့ အပျော်အပါး ပွဲလမ်းသဘင်တွေအကြားမှာ နေရယူစခမ်းသွားနေခဲ့တာ ကြာပါပေါ့လား။
ထိုးသားက ထိုးသားအလျောက် လောဘရဲ့သားကောင် အဖြစ် တစ်စ တစ်စ နွံနစ်နေချိန်မှာ ဒိုင်ကိုင်သူတွေရဲ့ အမျိုးသမီးခမြာမှာလည်း နို့စို့ခလေးကိုတောင်မှ ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းချော့မသိပ်နိုင်ပါပေ စိတ်ပူပန်ကာ အမွှေးတိုင်တွေထွန်းပေးရ ဟိုကိုး ဒီလျှိုး အမျိုးမျိုး ပူဇော်ပသလုပ်နေကြရပါသည်။
ငွေတိုးနဲ့ချေးငှား အရင်းထောင်ထားရသူများ ပိုဆိုးမည်ထင်ပါသည်၊ ထိုးသားက ကြိုးဆွဲညင်သာ ပညာပါလွန်းနေလျှင် သူတို့ကြိုးအဆွဲမှာ အံဖုန်းကိုအနောက်မှမသိမသာတွန်းချပြီး မှန်းဆကြိုးပမ်းမှုများလွဲချော်သွားအောင် ကြံဆောင်ပေးနေရတာ တပ်အပ်တွေ့ဖူးသည်။
အံချော် အံစောင်း ပြန်လောင်းရတဲ့ထုံးစံက ရှိတာကိုး။
အံစာတုန်းများကို တစ်လုံးချင်းလျှောကျအောင်ထိန်းဆွဲနိုင်တော့ ပထမ ကျနှင့်တာတွေ အဆင်မပြေလှလျှင် နောက်ဆုံးဟာကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆွဲချပြီးတွန်းတိုက်မိစေရင်း အနေအထားပြောင်းမလား ကြိုးစားကြတာဖြစ်ပါသည်။ ခုန်ပျံလိမ့်ဆင်းရင်း အံစာခွက်အပြင်ထိရောက်သွားပါကလည်း အလျော်အစားမလုပ်ရပဲ နောက်တဖန်ပြန်စပေးရပါသည်။ အံစာတင်ပုံတင်နည်းကလည်း စည်းကမ်းနှင့်အညီဖြစ်ရမည့်အပြင် ပညာသား ပါရန်လိုပါသည်။ မေတို့တော့ မြင်ပါများ၍ အလွတ်ရနေပြီ။ ပထမပွဲစဉ်တွင် လိပ်သုံးကောင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့လျှင် နောက်ပွဲစဉ်အတွက် လိပ်သုံးကောင်ကို ထိုးသားမြင်နိုင်သည့် မျက်နှာစာပြထားပြီးတင်ပေးရပါသည်။ လိပ်ပုံတွေမျက်နှာစာရောက်လျှင်ပြီးရောဟုတင်၍မရသေး ထိုးလက်အခြေအနေကြည့်လျက် အပေါ်မျက်နှာစာမှကြည့်လျှင် ငါးနှစ်ကောင်အကြားမှာ ကျားကိုညှပ်ထားသည့်အနေထားစသည်ဖြင့်ရောက်အောင်နေရာချပေးရပါသည်။
ထိုအနေအထားတွင် ထိုးသားက လည်လျှင် လိပ်နှင့် ဆင် ထိုးပါက နိုင်ခြေများပြီး ကျား သို့မဟုတ် ငါးလည်း မဆိုးပါ။ ကြက် နှင့် ပုဇွန် ကိုသွားထိုးလျှင်တော့ လူမိုက်ဟု ဆိုရပါမည်။
အပျော်အပါးမက်သော မေတို့ အပျော်ဆော့ရာ အပျော်မထိခိုက်သော်လည်း လောင်းကစားပွဲတွင် သူတပါးငွေများပါရှုံးကုန်သဖြင့် မိမိမျက်နှာကိုမိမိရိုက်နှက်ကာ ငွေလုခံရပါသည်ဟု လံကြုတ်ဇာတ်လမ်းဆင်တိုင်ချက်ဖွင့်သူများရှိသလို ရေထဲဆင်းသေကာ ဘ၀ကိုစတေးသွားခဲ့သူများလည်းရှိပါသည်။
သူတို့သူတို့တွေ၏ နောက်ကွယ်မှာတော့ ခွင့်ပြုမိန့်ပါမစ်ဖြင့်ပတ်သက်ဆက်စပ် ကျေနပ်နေကြသူလည်း ရှိသေးဆိုပါလား။
December 19, 2010 at 9:27 AM
၀တ္တုတွေဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ၊ အရေးအသားရော ဇာတ်လမ်းရော ချောနေတာပဲ စိတ်ပါဝင်စားအောင် ဆွဲဆောင်ရေးသွားနိုင်ပုံကလည်း (ချောချောရေးတာလို့မပြောပဲသိအောင် မူပိုင်ဟန်ကလေးတွေလဲရောစွက်ပါနေပြီး)
တစ်ခုတစ်မျိုးမရိုးရအောင်ဖြစ်နေတော့ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုနေသူတွေ မချီမွမ်းပဲ မနေနိုင်အောင်ပါပဲလေ။
ဗရာဘို ပါ ဝေးးးးးးးးးးး
December 19, 2010 at 9:39 AM
အစကတည်းက အစမဖော်တာ ကောင်းပါတယ်
မသွားဖူးလို့လား မသိပါဘူး။ စဖတ်ဖတ်ချင်းတော့
ချောတို့ ဂျင်ဝိုင်းများ ထောင်တော့မလို့လားလို့ ဟဟ
ဟုတ်ဖူးရယ်။ ပညာပေးမလို့ကိုး။ ကိုယ်ကတော့
အစားပဲမက်တယ်။ စားနိုင်ရင် ကိုယ်ဖို့ပဲလေနော့။
ပဇွန်ဟင်း မြန်မြန်တင်တော့ တူများကို သရေယို
အောင်လုပ်ပြီး ဟင်းဟင်း :P
December 19, 2010 at 9:47 AM
၀တ္ထုတိုလေး လာဖတ်သွားပါတယ် မမချောရေ... ရို့စ်ကတော့ တခါမှ လောင်းကစား မလုပ်ဖူးဘူး။ လောင်းကစားလိုပဲ ဂဏန်းတွေကို လောင်းကစားရတဲ့ ထီတို့ ၊ ချဲတို့လည်း တခါမှ မထိုးဖူးဘူး။ ထိုးလည်း ပေါက်မှာ မပာုတ်ဘူးလို့ ယုံလို့လေး) ခိခိ
December 19, 2010 at 10:10 AM
လေးကောင်ဂျင်တို့ ခြောက်ကောင်ဂျင်တို့ ကြားသာကြားဖူးတယ် မမြင်ဖူးဘူး။
ချောရဲ့ ၀တ္ထုလေးက သရုပ်ဖော်ဓာတ်ပုံနဲ့ တကွ ဆိုတော့ ဖတ်ရတာ ပိုပြီး အရသာရှိတယ်။ အံစာတုံးပုံကလဲ အဆန်းနော်။ အဲဒါမျိုးတွေ ခုမှ မြင်ဖူးတာ။ ဗဟုသုတ နည်းပုံများ။ :)
လောင်းကစားဆိုတာကတော့ ဘယ်ဟာမှ မကောင်းပါဘူး။ ငွေမျောရင်ငွေနဲ့လိုက်ဆိုတဲ့ အယူအဆကိုလဲ သဘောမကျဘူး။ ဒါကြောင့် အမကတော့ ရိုးရိုးထီတောင် မထိုးဘူး။ နှမြောတာလဲ ပါတယ်။
December 19, 2010 at 2:36 PM
အင်း...အစ်မချောရေ....ကျနော်တို့ဆီမှာတော့ ဂျုံးဂျုံးကျလို့ခေါ်ကြတယ် ဘုရားပွဲတွေမှာ တွေ့ရတတ်တယ်...ကစားတော့မကစားဖူးဘူး...ဒါနဲ့စကားမစပ် ချိုကျကို မိုးယုစံ လိုခေါ်တယ်ပေါ့...
သားသား ကြိုက်ကြိုက် :)
December 19, 2010 at 3:42 PM
လောင်းကစားတော့ လုံးဝ ဝါသနာမပါ...။ချဲတောင်မထိုး...။အဲ့လိုဘဝပျက်သွားသူတွေ ဘယ်လောက်ရှိ
မလဲမသိ...။မိုးယုစံ တော့ကြိုက်တယ်....(လက်ဘက်ရည်ချိုကျ ပြောပါတယ်...) :D။
December 19, 2010 at 5:34 PM
၆ကောင်ဂျင်ဆိုတာ အဲ့လိုဟာကြီးမှန်း ချော ရေးမှပဲ သေချာသိတော့တယ် ။ လောင်းကစားကတော့ ဘယ်ဟာမှမကောင်းဘူးလေ ။ လောင်းကစားဟာ ကံကိုလောင်းတဲ့ပွဲလို့လဲ ညီမလေးတော့ မမြင်ဘူး ။ လောဘရဲ့ ကြိုးကိုင်မှုကိုခံရတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေကို လောင်းတဲ့ပွဲလို့ပဲ မြင်တယ် ။ လောဘသားတွေရှိနေသ၍ လောင်းကစားပွဲတွေလဲ ရှိနေလိမ့်အုန်းမယ် ချောရေ....
December 19, 2010 at 5:38 PM
My heart was painful after i read it ........
December 19, 2010 at 7:13 PM
လောင်းကစားမှန်သမျှ ဘယ်ဟာမှ မကောင်းပါ
ဒါပေမယ့် လူဆိုတာ လည်းမကောင်းမှုမှာ မွေ့လျော်တတ်တော့ လည်း
နောင်တနဲ့ ယှဉ်ပြီးမှ အသိတရား၇တတ်ကြတာ ဓမ္မတာလိုဖြစ်နေပါတယ်.
December 19, 2010 at 8:55 PM
မ ချောရေ့ 
ကျွန်တော်လဲ ဝိုင်းထဲကို ဒီနေ့နောက်ကျမှ ရောက်ဖြစ်တော့ တယ်။
မိုးဟေကို ဝင်သောက်နေမိရင်း စဉ်းစားတာက ဆင် ဘက်မှာ ထိုင်ရင် ကောင်းမယ်လို့ ။
ဘာလို့ဆို ဂေါင်းကို ဆင်တက်နင်းတယ်လို့အိမ်မက်မက်တာကိုး ..။
ဒါပေမဲ့ဝိုင်းထဲရောက်လို့ခင်းထားတဲ့မျက်နှာသုပ်ပုဝါအနီကြီးကိုကြည့် မိပြီး
နမိတ်မကောင်းဘူးထင်တာနဲ့ပုဇွန်ဘက်ပြောင်းထိုင်လိုက်မိရောဗျာ..။
( ကောင်းပါတယ် ၊ ဖတ်လို့)
December 19, 2010 at 11:51 PM
လောင်းကစားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်မကောင်းစရာတွေ ရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။
အမေက ဖဲရိုက်တာ၊ လောင်းတာပြုတာ ၀ါသနာပါတယ်။
ကျမက မကြိုက်ဘူး။ ပြောလို့ မရတဲ့ အမေနဲ့ကျမ အမြဲ အဆင်မပြေခဲ့ဘူး။
December 20, 2010 at 12:02 AM
ခြောက်ကောင်ဂျင်အကြောင်းရေးပေးတာ ၀မ်းသာရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလောင်းကစား နဲ့ နစ်မြောစိတ်တွေ တော်တော်ရှိနေကြတာမို့ လိုအပ်သောစာပေကိုဖြည့်ပေးခြင်းပါပဲ ။
December 20, 2010 at 1:39 AM
ဆွေလေးတို့ဆိမှာတော့ ပွဲဈေးတန်းတွေမှာ တွေ့ဖူးတယ်.။ အံဂလုံ ၀ိုင်းဆိုလားပဲ။
လောင်းကစားဆိုရင် ဘာမှမကောင်းပါဘူး။ နောက်ဆုံး အရှုံးတွေနဲ့ မျက်ရည်တွေနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်သွားကြတာပါပဲ။
December 20, 2010 at 5:09 AM
ကံကြမ္မာနဲ့ထပ်ထားပြီး ရလာတဲ့ ရင်ခုန်ခြင်းကို နှစ်သက်ကြလို့
၆ကောင်ဂျင်ကစားသူတွေ စိတ်ပျက်သွားအောင် ကြံ့ပုံ ဖွတ် ပုံတွေနဲ့ အစားထိုးရင်
ဂျင်ထိုးတဲ့ တီးဆရာလေးနဲ့ အတူ ရင်ထဲဆို့နစ်ရပါတယ်။
ကောင်းကျိုးမပေးတဲ့ လောင်းကစားကို ဝေးဝေးက ရှောင်ဖို့အတွက် တွန်းအားပေးလိုက်သလိုပါဘဲ
December 20, 2010 at 5:44 AM
December 20, 2010 at 4:54 PM
December 20, 2010 at 9:20 PM
မမချောရေလာဖတ်သွားတယ်နော် မမပြောမှပဲ ခြောက်ကောင်ဂျင်ဆိုတာ သိတော့တယ် မမကိုကျေး ကျေးဗဟုသုတ တွေမျှဝေပေးတဲ့ အတွက်
December 21, 2010 at 12:05 AM
ဖတ်နေရင်း ကြက်သီးထမိတယ်...လောင်းကစားရဲ့ဆွဲငင်အားက ပြင်းတယ်...
လူတွေတော်တော်များများလေ အဲလိုတွေဖြစ်နေကြတာပဲ....တွေးရင်း ကိုယ်ချင်းစာတရားဖြင့် ရင်လေးမိတယ်...မှတ်သားသွားပါတယ်...မမ ...
December 21, 2010 at 12:28 AM
December 21, 2010 at 12:45 AM
ကိုထိန်လင်းလို လူတွေ အများအပြားရှိပါလိမ့်မည်၊ ထုံးစံအတိုင်းလောင်းကစား၏ နိဂုံးကကောင်းမည်မဟုတ်ပါ။
နယ်စပ်မြိုကလေးတစ်ခုတွင် ဝင်ကစားခဲ့ဘူးပါသည်၊ ဘာရယ်မှန်းသိရအောင်၊
အစထဲက ဘယ်လောက်ဖိုးပဲ ကစားမယ် သတ်မှတ်ထားသဖြင့် မရှုံးခဲ့ပါ၊
December 21, 2010 at 8:38 AM
အယ်ကွယ်...တို့ကတော့ အဖုံးလှန်ကြည့်တဲ့ ခြောက်ကောင်လား ဘာလားတောင် မကစားဖူးဘူး
တို့သိတာ ကုလားမတွေပဲ... ပွတ်လေကောင်းလေ..
အဲဒီမှာတောင် အပေါက်ချင်းအတူတူ အပွင့်မတူလို့ လျော်လိုက်ရတာနာတာပဲ..နောက်ဆုံးတော့လည်း မတတ်သူတွေများလို့ တို့ကတော့ လိမ်တယ် ခိုးတယ်.. အဲလိုကို ဒိုင်ကိုင်လာတာ... ပြီးတော့ မသဒ္ဓါရေ စာလေးတွေကို သိမ်းပြန်လာတယ်.. အဲဒါပဲကောင်းတယ်
December 21, 2010 at 8:04 PM
ဒီပိုစ့်လေးကို ဖတ်ပြီး အသိတွေတော်တော်ရသွားတယ်။
အခုလို ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
December 28, 2010 at 5:08 PM
ကျွန်တော်လောင်းကစား လုံးဝ ဝါသနာမပါဘူး!!!
February 20, 2011 at 2:23 AM
▼ Dec 22 (6)
မောငျမောငျရေ - ၁